လေးကျွန်းမြေ: June 2014
အ ကျ န် ( ၁ )
စာနာဟန်ငေးလို့ ။ ။
မ င်းညွ န့် လှို င်
ဓ မ္မ လ က်ဆောင်
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 11:23 AM
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 1:23 AM
လ က် နှ စ် ဘ က် | မင်းညွန့်လှိုင်
လ က် နှ စ် ဘ က် မ င်းညွ န် လှို င်
လ က် နှ စ် ဘ က်
လက်နှစ်ဘက် . . .
လက်နှစ်ဘက် . . . . . . . . .
ဒေါင်းအိုးဝေ | ဇန္နဝါရီလ|၂၀၁၄ မှ
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 8:20 PM
ေ ရွှ ပြ ည် ကြီး
အောင်လွန်းမြိုင် + ရန်လင်းအောင်
ေ ရွှ ပြ ည် ကြီး|အောင် လွ န်းမြို င် + ရ န် လ င်းေ အာင်
သမိုင်းဟာ . . . .
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 7:45 PM
တောင်ငူမြို့ မြတ်စောညီနောင် နှင့် ရှင်ပင်ကျောက်ဆောက်စေတီများ သမိုင်းအကျဉ်း
ရှင်ပင်ကျောက်ဆောက် နှင့် မြတ်စောညီနောင်
မြတ်စွာဘုရားသည် လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာ၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် တစ်နေ့တွင် “ ဇေယျဝဍ္ဎန’’ တိုင်း၊ တောင်ငူ ဒေသ သို့ ရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်ဂ၀ံပတိ၊ ရှင်သီဝလိ၊ တို့နှင့် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူလာရာ တောင်ငူမြို့ အနောက်ဘက် မင်းဝံ တောင်သို့ ရောက်လာရာ ခပေါင်းချောင်းဘေး “ ရွှေလောင်း’’ ရွာ အနီးတွင် ခေတ္တ တန့်တော်မူပြီး ရှင်အာနန္ဒာအား “ ငါ တို့ ညီ
နောင် နှစ်ပါး ကြက်မင်းညီနောင် ဖြစ်စဉ်အခါက ယခု နေရာတစ်ဝိုက်တွင် အစာရှာပြီး စစ်တောင်း( ပေါင်းလောင်း) မြစ် အရှေ့
ဘက်တွင် အိပ်တန်းဝင်ကြောင်း “ နောင် ငါပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသောအခါ ငါ၏ ကျောကုန်းရိုးမှ ကျသော ဓာတ်တော်ဖြင့် စေတီတည် လတ္တံ့ ’’ ဟု ဗျာဒိတ်ပေး ခဲ့၏ ။ ထို့နောက် စစ်တောင်းမြစ်အတွင်း သို့ စီးဝင်သော “ ပြုံး’’ ချောင်းဘေးတွင် ရပ်တန့်တော်မူပြီး
“ ဤအရပ်သည် ငါတို့ ကြက်မင်းညီနောင်ပေါက်ဖွားပျော်စံရာ အရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငါပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသောအခါ ငါ၏ လက်ရုံးတော်
မှကျသော ဓာတ်တော်နှင့် မေးရိုး မှကျသော ဓာတ်တော်တို့ဖြင့် စေတီတည်ထားကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည် ။”ဟု ဗျာဒိတ်တော်ပေးပြီး
ဤတွင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ ကူးကြွရိုးထုံးစံမရှိ ခဲ့ကြောင်း ဆိုကြရာ မြတ်စွာ ဘုရား တောင်ငူဒေသသို့ ကြွတော်မူလာခြင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားသည် ရှင်အာနန္ဒာ နှင့် အတူ အတိတ်ဘ၀က ကြက်မင်းညီနောင်
ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျင်လည်ရာအရပ် ဖြစ်ခဲ့၍ လည်းကောင်း ယင်းဒေသကို နောင်တွင် သာသနာထွန်းကားစေလို၍ လည်းကောင်း
“ နိမိတ္တ ” တန်ခိုးပြ၍ ကြွမြန်းတော်မူလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ယူရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 5:12 AM
ရ န် လ င်းေ အာင် ၊ ကျနေ
ကျနေ ( ကဗျာ- ဗီဒီယိုဖိုင် )
https://www.youtube.com/watch?v=b1uPRJiIjrg ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ် ။
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 10:43 AM
ငါ့အဝေးများ ၊ ရန်လင်းအောင်
ငါ့အဝေးများ ရ န် လ င်းေ အာင်
ငါ့ အဝေးများ . . .
ရင်နဲ့ ရင်းလို့ ဘယ်လောက်ကာကာ မလုံခဲ့
ကဗျာတွေ ဘယ်လောက်ထည့်ထည့် မ၀ခဲ့
ဆယ်ရမယ့် မြစ်တွေ ချောင်းတွေ
သွေးနဲ့ ရင်းမှ မွှေးမယ့်ပန်းတွေ
မျက်ရည်နဲ့ ဖွဲ့ မှ လှမယ့်ကဗျာတွေ
စောဒက မတက်နိူင်တော့ပြီလား ၊
သနားပါ၊ များသတ္တ၀ါ "
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:52 AM
လေးကျွန်းမြေ ၊ ကဗျာတွေ့မှတ်တမ်း (၁)
https://www.youtube.com/watch?v=o1ECsho3RG0 လေးကျွန်းမြေ ၊ ကဗျာတွေ့မှတ်တမ်း (၁)
Posted by လေးကျွန်းမြေ at 9:41 AM
တောင်ငူမြို့ မြတ်စောညီနောင် နှင့် ရှင်ပင်ကျောက်ဆေ...